Amanqaku kaBill Acholla Martech Zone |
Amanqaku ngu UBill Acholla
UBill Acholla uyintengiso ekhokelayo yedijithali ehlala ipompa umxholo ongahlambulukanga ongasetyenziswa ngabantu abafana nawe ukukhulisa ishishini labo, njengale nqaku. Jonga ibhlog yakhe yeshishini kwi IBillacholla.com
Kutheni ukuBekwa kwegama eliphambili ungaze ube yiNtsebenzo yakho ePrayimari
NgoMgqibelo, Julayi 28, 2018 NgoMgqibelo, Julayi 28, 2018 UBill Acholla
Kungekude kudala, amacebo e-SEO ubukhulu becala aqulathe ukubekwa kumagama aphambili. Amagama aphambili yayiyinto ephambili yokulinganisa ukusebenza kwephulo. Abakhi bewebhusayithi banokufaka iisayithi ngamagama aphambili, kwaye abathengi bangathanda ukubona iziphumo. Iziphumo, nangona kunjalo, zibonise umfanekiso owahlukileyo. Ukuba isifundo sakho se-SEO sabaqalayo sibandakanya ukusebenzisa izixhobo zikaGoogle ukufumana amagama aphambili emva koko uzibeke kwiwebhusayithi yonke, inokuba ihamba